Yiba endlini encane yezwe - iphupho nganoma yisiphi labetibambile empilweni yomuntu. Indawo lapho ungakwazi ukuza ehlobo futhi nje uphumule nganoma yisiphi isikhathi. Izwe endlini ngezinjongo ezinjalo - likhulu kakhulu futhi ukuthenga okukhulu, Cottages ukutholakala, njengoba umthetho, kusho khona engadini, okuyinto uthembisa omningi phezu kwezwe, kodwa indlu - ekahle isikhathi esifushane bangahlali befuna futhi indlela uphumule.
Cha, lokhu kuyinto entsha buzz izwi lingenzeki igama elidala for the evamile iholide ekhaya noma villa, ngokujwayelekile abangamakhulu amaningana ukuhlabana ebaleni futhi lakha ambalwa eminyaka adlule. Cottage - kungcono nje uhlobo olusha endlini yezwe, eyenzelwe umndeni ehlanganisa abantu abathathu noma ngaphezulu. Kungaba esinezitezi ezimbili noma polutoraetazhny ekhaya, njalo yokugcina kanye nezinye izithasiselo. Ngokuvamile uthanda ukwakha Cottages ogwini emachibini noma eduze izindawo ebabazekayo, ukuze ujabulele ukubukwa amahle uphumule, kodwa namanje yimani niqonde ezifana ingcebo emzini, ngoba abantu abafuna ukuhlala induduzo enjalo unyaka wonke.
Kuyaphawuleka ukuthi Cottages, naphezu inkimbinkimbi isakhiwo sabo, kucatshangwa ukuthi kuyabiza futhi elite ingcebo zokuthenga ukuthi akuwona wonke umuntu esimweni. Kodwa la manga Kulula ukuba sixoshe, ngokubheka intengo zokwakha, noma ufune ucishe eyamukelekayo inketho "Avito" kwesigaba - "Nezindlu Ezingaphansi".
Cottages ezibhekwa elite ingcebo, ngoba eziningi izimo, ukuhambisana okuyinto esiyisibopho. Omunye wabo, futhi into ebaluleke kakhulu: indlu kufanele ifakwe wonke Izinsiza, ngaphezu:
ekwakhiweni cottage a lot of ukunakwa ikhokhelwa ukubukeka kwaso, olungaphambili lwesonto isakhiwo kumele kube enhle;
musa sikhohlwe landscape okuzungeze izakhiwo;
indlu inkonzo yesikhathi Izinsiza ehlukahlukene: amanzi, igesi, ugesi, ucingo, internet, yokugezela, njll;..
cottage ndawo, ngokuvamile izikhathi eziningana Cottages ngaphezulu;
khona elisophahleni lwendlu - izakhiwo zokuhlala egunjini eliphezulu ophahleni nge ezitshekile ophahleni - is best libhekene cottage;
iziko egumbini lokuphumula, ukudala induduzo.
izindlu Country - kwabaningi izinkomba kokuba yilungu Umuntu ocebile "lombhalo" ezithile, njengoba nje kuvamile namanje ekhangayo. Kodwa empeleni ukuyikhokha kungaba ngisho umnikazi webhizinisi elincane.
Isidingo ezifana ingcebo lukhula njalo ngenxa inzuzo eliphezulu izindlu, ikakhulukazi ezindaweni resort. Kukhona evamile ukuba nginikeze izindlu ukuze iqashwe ehlobo. Ngokuvamile lokhu izindlu kulula ukwakha bebodwa: kuba inzuzo kakhulu futhi ashibhile, ukuthi nje ngaso sonke isikhathi inqubo ihamba ngokushesha.
Izinhlobo nezandiso indlu ezweni
Ngokuvamile i-cottage - akusiwona endlini enkulu, futhi "flat" ezincane emhlabathini eziningi izandiso. Ngenxa fantasy abanikazi eduze Cottages ngokuvamile Arbor. Ngokuvamile, akukho port imoto ngoba indlu ngokwayo kungenziwa akhiwe pool noma ichibi lokwenziwa, abanye abanikazi ngisho ukwakha okugeza.
ukunakekela okukhethekile unikezwa Loft - ngaphandle endlini noma cottage nhlobo. Ngaphansi kophahla isakhiwo zitholakala ngokuvamile kakhulu igumbi elihle futhi sibheke besibhakabhaka esinezinkanyezi ngefasitela ku zantambama ehlobo iphupho kwabaningi.
Ukwakhiwa yimuphi indlu iqala, okokuqala kunakho konke, nge nomklamo walo. IKhasimende kumele pre-echaziwe ubukhulu isakhiwo, indawo amakamelo kuwo kanye landscape. Ngokuvamile walala cottage kusikisela ukuba khona egumbini lokuphumula, ikhishi, indlu yokugezela esitezi sokuqala kanye lokulala kanye nezinye izakhiwo ezidingekayo zitholakala ngosuku lwesibili.
Layout ekhaya, ungakwazi noma zenzele wena ngosizo izinhlelo modulators, noma ufune usizo kusukela ochwepheshe kulo mkhakha. Ngokuvamile, amaphrojekthi Cottages kukhona in the domain yomphakathi, okhombisa inani okudlekayo futhi ukwenze zonke izibalo. Zonke osalayo uthi umnikazi esizayo - ukwakha indlu inzuzo yangempela wanezela izici zayo siqu.
amaphrojekthi ejwayelekile futhi ngabanye
Kuyazuzisa Futhi elula ukwakha izindlu ngenxa yezizathu eziningana: okokuqala, ngoba izinto zabo akuzona eqolo kulula ukusingatha, kanti okwesibili ukwakhiwa cottage ngeke ume unyaka owodwa noma emibili, njengoba ngokuvamile kwenzeka nge izindlu noma Villas, lokhu ngenxa enkulu ukufuneka ukwakhiwa izindlu zalolu hlobo.
Bala izindleko ukwakhiwa kwezindlu kungacinywa ochwepheshe lenkampani ukwakhiwa, esibekela amazinga ayo amasevisi, ezifana endlini ukufudumala, zokuxhumana liqine, nokuningi. Njengomthetho, elikhulu endaweni cottage, ephansi izindleko imitha square.
Ukwakhiwa Cottages esifundeni Moscow, ngokwesilinganiso kungadla ruble abayizigidi ezintathu, singabali intengo umhlaba.
Ukuze izinkampani emisebenzini yokwakha umuntu, njengoba umthetho, zithathwa ngaphansi uzimisele, ngoba kulesi simo kukhona nobunzima xaxa. Noma kunjalo, Cottages, lapho zithombe azikwazi uyabukeka emehlweni, yakhelwe amaphrojekthi ngamanye. Self-kokwakha zephuze isikhathi eside ngenxa izici ezingalindelekile, kodwa ekugcineni uzothola iphupho lakho ekhaya.
Uma umnikazi enquma ukwakha indlu kusuka ekuqaleni bebodwa, into yokuqala okufanele unqume, indlu izindonga zizokwenziwa noma iyiphi impahla. Ngokuvamile cottage yakhiwa ngamatshe noma ngezitini ezibomvu, kodwa eminyakeni yamuva kakhulu kube nenzuzo enkulu futhi kulula ukwakha likhiphe zikasimende, okuyinto ishibhile kuka ezinye izinto, siyasebenza kakhulu futhi uzinze.
Ngokuvamile owakha indlu ngokhuni, kodwa kufanele angabonelela isimo sezulu kanye sezulu izimo. Kwezinye izindawo eRussia isimo sezulu zinomswakama futhi zibe yizinkuni, kuyilapho ezindaweni resort, ngokwesibonelo eCrimea, Cottages lokhuni bayindlala kakhulu.
izinkampani Ukwakhiwa alungele ukunikela zonke izinto ezidingekayo ngamanani yokuncintisana, kodwa sokwakha ibhilidi kusuka ekuqaleni kuyodingeka bebodwa, kanye ukuklama isandiso, ukudala ezinye izici ezakhiwo nokuningi, futhi kunzima kakhulu Sebawoti, kungekho nakho ekwakheni.
Izindlu eziningi kanye Cottages, etholakala ezindaweni resort isizini ihlobo ukuletha inzuzo enkulu zabanikazi, ngoba ukuqasha eduze kolwandle uyawuthanda cishe njengoba nomsebenzi omkhulu wokwakha, kanye ukuthenga. Abanikazi abangaphili e suburban amakhaya bonke ngonyaka, ngokuvamile ukuqasha indawo ukhululekile. Have endlini yakho siqu - kusho ukuthini ukwazi nganoma isiphi isikhathi ukuqhubeka eholidini, kanye inzuzo by ukuqasha izindlu ezengeziwe ukuze iqashwe.
ukuphila Small nokugenca kulabo baye bacabange kuphela ngezithombe kanjani ukuthatha ubunikazi izindlu suburban: kungenzeka isikhathi esifushane ukuqasha cottage ejwayelekile, ezakhiwe yinkampani ethile, futhi bazise isakhiwo yendlu nenduduzo izindlu jikelele. izinkampani Ukwakhiwa ngokuvamile yimani niqonde amakhaya oyisibonelo, zihluke nezinye kuphela umklamo ngamunye futhi ezicashile ngesimo asungula nezokuxhumana.
Ikhala sinuses. I-CT scan sinuses paranasal